नारायण अधिकारी,चितवन । यहाँको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्छ । प्रचण्ड गर्मीका कारण असिनपसिन भएर पनि यस क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा पहिलो रोजाइ भने यही अस्पताल हुने गरेको छ । ...
काठमाडौं । काठमाडौंको चावहिलस्थित ओम अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएको छ । पत्थरीको अप्रेसन गर्दा आन्द्रा काटिएर बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भएका छन् । मृतकका आ...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ...
बीबीसी। युवा–युवतीलाई निकै कम उमेरमा यौन सम्बन्ध स्थापित गरेर आफ्नो कुमारित्व गुमाएकोमा निकै अफसोस हुने ब्रिटेनमा यौन व्यवहारमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ । किशोरावस्थामा भएका एक तिहाई बढी महिला र ए...
मेलम्चीपछि उपत्यका बाहिर मन्त्रालयको यो दोस्रो ठूलो आयोजना पोखरा । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ स्थित मर्दीखोला खानेपानी प्रशोधन शुद्धीकरण आयोजनाको मंगलबार शिलान्यास गरेकी छन् । मर्दी खोलाको पानीलाई...
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालमा महिला र अशक्त बिरामीलाई लक्षित गरेर छुट्टै टिकट काउण्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन आइतबारदेखि छुट्टै टिकट काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको भरतपुर अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल...
मुग्लिन । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । गाउँपालिकाले यसअघि स्वास्थ्य सेवा नपुगेका वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेपछि सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगेका हुन् । ...
विदुर । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाका दुई विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड र भेन्डिङ मेसिन वितरण गरिएको छ । सोमबार भएको एक कार्यक्रममा लिखु गाउँपालिकास्थित चौघडामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला नेता एवं लायन्स क्लब अफ काठमा...
काठमाडौँ । सपनामा यौन सम्पर्क भएको देख्नु राम्रो हो भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिन सक्छ, ‘सपनामा यौन सम्पर्क भएको देख्नु किन आवश्यक छ ?’ वास्तवमा दिनभर काम गरेर थाकेका मानिसहरु घर आएपछि उनीहरु राम्रो निद्रा र ...
सुत्ने बानीबेहोरामा केही सुधार गरे मानिसहरूले आफ्नो 'शरीरको घडी' मा परिवर्तन गर्न सक्ने र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । यूके र अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले राति नसुतिकन सक्रिय रहने मानिसहरू...
काठमाडौं । अधिकांश पुरुषलाई फिमेल अर्गाजमको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । पुरुषहरुलाई आफू सन्तुष्ट भएपछि संगिनी पनि सन्तुष्ट भइन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, महिला र पुरुषको शरीरको बनावट भिन्न किसिमको हुनाले जसरी पुरुष सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसै ग...
काठमाडौँ । महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध जब यौन सम्पर्कसम्म पुग्छ, यसको अर्थ दुवैबीच एकअर्काप्रति पूर्ण विश्वास छ भन्ने हुन्छ । तथापि, केही पुरुष भने महिलाले आफूसँग अर्गाजम अथवा चरम आनन्दको बारेमा झूट बोलेको गुनासो गर्दछन् । कति...
बीबीसी । ब्रिटेनमा सन् २००७ मा धूमपान प्रतिबन्धित गरियो, त्यसको एक दशकपछि सामान्य खोल राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । त्यो सबै मानिसहरूलाई चुरोट खानबाट निरुत्साहित गर्न गरिएको हो । र, चिनी पनि चुरोटकै बाटो लागिरहेको देखिन्...
काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै क्षयरोग निवारण गर्न थप चुनौती देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र रहेको सो कार्यक्रम रहेको छ । क्षयरोग उपचारका लागि दक्षजनशक्ति, प्रयोगशालाको अभाव साथमा...
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–५ स्थित विन्जेलमा झाडापखलाको महामारी फैलिएको छ । झाडापखलाका कारण एकै गाउँका ५० बढी बिरामी भएका छन् । केहीको स्थिति गम्भीर रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले जानकारी दिए &nbs...
मानदत्त रावल,जुम्ला । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ बुढुगाउँस्थित विराट स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजलसमेतको अभाव रहेको छ । गाउँपालिकाले समयमा औषधि नपठाउँदा यस्तो अभाव भएको हो । स्थानीय विन बुढाका अनुसार अहिले सुक्खा मौसममा...
काठमाडौं । अधिकांश मानिस यौन चिकित्सक अथाव थृेरापिस्टलाई दुई प्रश्न सोध्ने गर्छन् । पहिलो – यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? अर्को – कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न अथवा उत्तेजित रहन सकिन्छ ? यस्तोमा आफ्नो यौ...
बलेवा । बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका–१ को पालामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरिएको छ । भवनमा नियमित उपचार सेवासहित चौबिसै घण्टा सुत्केरी सेवा दिने गरी बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सर...
लहान । लामो समयदेखि नवीकरण नगराएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सात दिनभित्र बन्द गर्न सिरहास्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । नवीकरणका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बलमिच्याईं गरेर सञ्चालन गरिरहेको जिल्...
लम्की । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१० चुहामा सामुदायिक अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ । सो ५१ श्यैया रहने अस्पतालको सांसद झपट रावलले शिलान्यास गरेका हुन् । उनले अस्पताल निर्माण भएमा लम्कीचुहा नपा, बर्दगोरिया र मोहन्याल गा...